फस्टाउँदो “सती” पत्रकारिता – Gulmiews
फस्टाउँदो “सती” पत्रकारिता
July 6, 2016 Sanju Kauchha
No comments	-टोपलाल अर्याल
महिनामा धेरै कार्यक्रम सदमुकाममै हुन्छन्, थोरै गाउँमा । प्रायः सदमुकामका कार्यक्रम छुटाइदैन, गाउँमा जाने प्रायः मैका मिल्दैन । रेडियोमा पहिले पहिले कार्यक्रमका चिठी आउँथे, अहिले एस.एम.एस र फोन वा इमेलको जमना छ । कहिलेकाँही दिनमा चार पाँच ओटा कार्यक्रम हुन्छन् । जिल्लामा सबै भन्दा बढी कार्यक्रम सरकारी कार्यालयकै हुन्छन् । गैरसरकारी कार्यालय र राजनीतिक दलका कार्यक्रम पनि भै रहन्छन् । प्रायः सबै कार्यक्रममा पुगिन्छ, सबै कार्यक्रमका समाचार तयार पार्ने, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नु मेरो दैनिकी हो ।
कार्यक्रममा पुगेपछि के नै हुनु त्यहाँ कार्यालयले कार्यक्रम प्रस्तुत गर्छ । हाकिम साव अरन्तरक्रिया रहेछ भने टिप्पणी नै नआइदियोस भन्ने चाहन्छन्, यदि कुनै योजना र बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेछ भने एकतर्फी प्रस्तुत हुन्छ । हाकिम सापले यो वाक्य छुटाउने कुरै भएन यति धेरै कार्यक्रम र बजेट आउनुमा यहाँका राजनीतिक दल, कार्यालय र पत्रकारको विशेष भूमिका छ । मैले लेख्छु सुन्नेले सुन्छन्, चित्त नबुझ्ने वा एकछिन नबुझाए जस्तो गर्नेहरु प्रतिक्रिया पनि दिन्छन् तर धेरैले तारिफ नै गर्छन, ताली पड्किन्छ कार्यक्रम सकियो । दुई चार सयको खाम गोजीमा, सबै मख्ख । रेडियो आयो फलानो कार्यालयद्धारा निती तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भन्ने समाचार ठोक्यो । कार्यक्रममा यो यो बोले, सफल कार्यान्वयनमा जोड दिए, सकेसम्म को को थिए समाचारमा नछुटाइदिने चलन छ । सके यति बेला सुन्नुहोला भन्नुपर्छ, त्यसपछि तारिफ नै तारिफको समाचार आउँछ । कार्यालयका हाकिम खुसी, बोल्ने बक्ता खुसी किन की मख्ख नै पारेर मेरो पत्रकारिता चलेको छ, त्यसैले म पनि खुसी । केहिबेरमा फोन आउँछ भाई भोली सँगै चिया खानुपर्छ, ओके सर । भोली चिया, पर्सी खाजा अनि खाना हुँदै बल्ल सुरु हुन्छ हिमचिम । मैले कहाँ सक्छु र उसको विरुद्ध कलम चलाउन । मलाई सकेसम्म राम्रै समाचार लेखिदिने बानी परेको छ, उसले पनि सकेसम्म मेरा र मैले भनेका सबै काम गर्दिएको छ अहिले सम्म ।
गैर सरकारी कार्यालय वा प्रोजेक्ट जिल्लामा धेरै छन् । झन् कमेन्ट नै मन नपराउने हुन तिनीहरु । सकेसम्म धुमधामका साथ कार्यक्रम सम्पन्न गर्छन् । प्रोजेक्टले भत्ता राम्रै दिन्छ भन्ने पुरानो छाप धेरैमा परेको छ । सरकारी वा पैसा नहुने कार्यक्रममा फुर्सद नमिल्नेहरुलाई पनि प्रोजेक्टका कार्यक्रममा समय मिल्छ । पत्रकारको पनि राम्रै उपस्थिति हुन्छ । फर्किन्छु रेडियो अनि सोच्छु वर्षभरिको आम्दानीको स्रोत मैले किन गुमाउनु, भनसुन गरे भने एकदुई जनालाई त जागिर लगाउन पनि सकिन्छ । किन दुश्मनी मोल्नु तातो न छारो । लेखिन्छ अनि पढिन्छ समाचार, यो कार्यक्रम आयो र उ कार्यक्रम आयो । सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता खोज्न मैले बिर्सीसकेछु । खानेपानीमा लाखौ रकम प¥यो भनेर समाचार लेखेको मैले सम्झन्छु तर गाउँमा पानी खान नपाएर काकाकुल भएका जनता बिर्सिसकेछु । लाखौको विद्युतीकरण योजना प¥यो मैले नै लेखेको छु तर मट्टितेल किन्न नसकेर घाम सँगसँगै सुत्ने गरिबको समाचार लेख्न मैले बिर्सिसकेछु । किनकि मेरो पत्रकारिता मख्ख पार्दैमा टिकेको छ वा बाँचेको छ । मैले कसैको विरुद्धमा लेख्न सक्दिन, मैले त्यहि सिकेको छु, अड्डा र शासन चलाउनेहरुलाई त्यही फापेको छ ।
राजनीतिक प्राणी हुँ, कुनै दलमा स्वाभिक आस्था छ । आफू अनुकुल दलको मात्र होइन समान दृष्टिले सबै पार्टीको समाचार लेखिएको छ । तर मैल जर्बजस्त मनको बाघले खाएको देख्छु फलानोले हाम्रो समाचार लेख्दैन वा पढ्दैन । भ्रमले बोलाउदैनन् पनि, समाचार टिपाउदैनन् तर जानकारी पाएसम्म राजनीतिक कार्यक्रममा पुगिन्छ । सुन्ने र सुनाउने त भाषण नै हो तर उस जुनीको सराप भनु भाषण पनि भर्खरै काम शुरु भएजस्तै गरि लेख्नुपर्छ, थाहा छ आफैलाई माख्खो मार्ने होइनन् । यो वा त्यो दल भन्ने गर्छन् तर काम गर्दैनन्, मलाई गरेको भन्दा भनेको समाचार हो भन्न अभ्यस्त बनाइएको छ । किनकी मैले लोकसेवा भुले, मेरो क्षमता र सीप त कता गयो कता थाहा छैन । मैले त्यही सम्झेको छु, जागिरमा भनसुन हुन्छ, नराम्रो गर्दा र आक्रमण हुँदा संरक्षण हुन्छ र एकदुई जना आफू अनुकुल नचल्ने कर्मचारी र व्यक्तिहरुलाई तह लगाउन सकिन्छ । त्यसैले होला पार्टी कार्यालय धाउन, अनुकुलका नेताको भजन गाउन सकेसम्म भ्याउनु पर्छ मलाई । अब खै कसरी सकिन्छ उनीहरु विरुद्ध पनि कलम चलाउन, आजकल त मेरो कलमले विरुद्धको समाचार लेख्न छाडिसकेको छ ।
यो समाज र दुनियाँ चाकडीमा लिप्त छ । मैले कहिलेकाँही सम्झन्छु, यो समाजले मलाई राज्यको चौथो अंग भनेको । मलाई थाहा छ, समाजमा दबिएको वा दबाइएको, लुकेको वा लुकाइएको विकृति, विसंगतीलाई पर्दाफास गर्नु, आवाज बिहिनहरुको आवाज बुलन्द गर्नु र सामाजिक न्यायको बाटोमा सबैलाई एकजुट गर्नु मेरो कर्तव्य हो । गरिबमाथी अन्याय छ, पीडित माथि अन्याय छ, घर मै आमा अन्यायमा छिन् तर न बाबु न्याय खोज्न हिड्छन् न आमाको नै पहुँच छ न्याय सम्म, गरिब त गरिब नै भयो । पीडितले न्याय पाउन त राजनीतिक खोल ओड्नुपर्ने बिडम्बना बनेको छ । गाउँमा नौ वर्षीय बालिका बलात्कृत हुन्छे हारगुहार गर्दै सदरमुकाम आउनुपर्छ । तर न्यायका लागि पीडित र पीडकको राजनीतिक बुझिन्छ, सामाजिक इज्तत र स्तर हेरिन्छ । पीडितवाला पिडककलाई हदैसम्मको कार्यवाही चाहन्छ, पीडकवाला सकेसम्म फुस्काउन चाहन्छन् । एउटा पीडित पक्षको राजनीतिक दल अर्काे पीडक पक्षको राजनीतिक दल, बलात्कृत बालिकामाथी पनि राजनीति हुन्छ । त्यस्तो अवस्था हुँदा पनि लेख्न सक्दिन वा बोल्न नसक्ने भएको छु त्यसैले मुखदर्शक बनिरहेछ, कठै मेरो पत्रकारीता ।
गाउँभरी फर्जी काम भैरहेको छ, कार्यालयको अवस्था उस्तै छ । चार दिन मात्र डोजर लगाएर लाखौ कुम्ल्याइएको छ । राजनीतिक दल कर्मचारी कै हजुरिया बने खबरदारी कसले गर्ने । स्थानीय निकायको चुनाब नभएको धेरै वर्ष भयो । जताततै मनपरी तन्त्र छ, कर्मचारी कै शासन चल्छ जहाँ पनि । मृतक व्यक्तिलाई ज्यूँदो बनाएर वृद्ध भत्ता वर्षाै खाएको देख्दा, फर्जि योजना र कागज बनाएर स्थानीय संयन्त्रका बोलवाला नेता र कर्मचारी मिलेर पैसा करल्याम्मै खाएको देख्दा देख्दै मलाई विरुद्धमा नलेख्ने सराप परेको छ ।
त्यसैले यो प्रवृद्धि गाउँटोल छरछिमेक र समाजमा व्याप्त छ । बेला बखतमा सुशासन, पादर्शिता र जवाफदेहिता नारा ओकल्ने व्यक्ति, संस्था र समाज नै यस्तै यस्तै समस्याले जगडिएका छन् । खरो पत्रकारीता समाजमा बिक्दैन्, त्यसैले होला त्यस्तो पत्रकार यो जिल्ला टिक्दैन् । नखानेले ठोक्न खोज्दा खाएकाले रोक्न खोज्दो रहेछ, त्यसैले रोक्न खोज्ने प्रवृद्धि अहिले हावी छ । धेरै कार्यालय संघसंस्था र व्यक्तिमा मनोमानी धेरै भयो अचेल । कयौं समय भयो न हल्लाएको र न टकटकाएको, त्यसैले उनीहरु प्रवल देखिएको सत्य हो । यो कसैले बुझेको छैन, भोली के हो ? । मत बोल्नै छाडिसकेँ वा लेख्न पनि जाँगर छैन । मलाई भ्रष्टाचार, अनियमिता र अत्याचार भएका समाचारका बिषयवस्तु देखाइदिने मित्रहरु तपाई आफै लेख्नुहोस । पत्रकारीता जस्तो सम्मानीत पेसा अहिले घाम नडुब्ने बेला सम्मलार्ई मात्र साँघुरिएको छ । अहिले आफुलाई छोडेर अरुलाई कम्मेन्ट गर्ने प्रवृत हावी छ ।
बिरुद्धको समाचार लेख्ने हिम्मत कस्को ? लेखे बेलुका फोन आउला की मुद्दा पर्ला भन्ने डर, मलाई समस्या परेको बेला संरक्षण गर्ने को ? मैले कयौं पटक धम्की बेहोरेको छु । त्यति मात्र होइन मेरै साथीले कुटाइ खाँदा राजनीतिक गरेको देखेको छु । पैसा माग्न कै लागि हाकिम सँग आफ्नै अर्को साथीको आलोचना गरेको पनि भोगेको छु । मैले सोचे थुक्क मेरा साथी, कठै मेरो पत्रकारिता, आफैलाई प्रश्न गर्थे खोइ मेरो सुरक्षा ? त्यसैले मैले गर्नै पर्ने थियो सती पत्रकारिता । आफ्नो मृतक पतिको चितामा पत्नी पनि ज्यूँदै जल्नुपर्ने सती प्रथा जस्तो जो जता दौडिन्छ, उसकै अनुकुलतामा कलम चलाउनुपर्ने कठै हाम्रो सती पत्रकारिता । त्यहि बिकेको छ, त्यहि टिकेको छ ।
(लेखक गुल्मीमा रहेर पत्रकारीता तथा मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कार्य गर्दछन् ।)
Related Posts	राष्ट्र मक्काउने धमिराको यस्तो रँजाई कहिलेसम्म ?...	September 14, 2016	मिसन जिबी रोड “रातो लाईटको, कालो कहानी”...	July 30, 2016	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website ताजा अप्डेट	मृगौला पीडितको उपचारका लागि सहयोग